ခေတ်၏လက္ခဏာများ - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘုရားသခင့်ဘုရားကျောင်းဆွစ်ဇာလန်
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2018-03 > တိုင်းမ်လက္ခဏာ
အချိန်ကပျံ! သင်သည်စပါးရိတ်ရာကာလမှည့်သောအသီးများမရခင် ဦး စွာနွေ ဦး ပေါက်ပွင့်ခြင်းကိုကြည့်ပြီးနွေရာသီ၏အံ့သြဖွယ်နွေးထွေးမှုကိုမြည်းစမ်းခဲ့သည်။ သင်၏မျက်လုံးများကျယ်ကျယ်ဖွင့်ပြီးအနာဂတ်ကိုကြည့်ပါ။ သင်ကြည့်ရှုသည့်နေရာပေါ် မူတည်၍ အဖုံးပုံ၏သင်၏အကြည့်သည်နှင်းခဲဖြင့်အလှဆင်ထားသောချုံဖုတ်၊ အရိပ်ရှိသစ်တောသို့မဟုတ်နောက်ခံရှိတောင်တန်းများအထိကျယ်ပြန့်သည်။ သင့်အားမထိုးဖောက်နိုင်သောတိမ်ဖုံးဖြင့်လည်းလူတို့သင့်အားထွန်းလင်းတောက်ပသောအလင်းရောင်ကိုမခံစားရသည့်အတွက်သင်လည်းစိုးရိမ်နေနိုင်သည်။
ငါခဏ၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုတွေ့ရတော့ဝမ်းသာတယ် ငါ့နာရီကိုကြည့်တဲ့အခါဘယ်လောက်ကြာလဲ၊ တစ်ချိန်တည်းမှာငါ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုပြတယ်။ ထိုအရာအတွက်ကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်ရေးရာပွင့်လင်းသောမျက်လုံးများလိုအပ်ပါသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သာယေရှုနှင့်သူပြောသောအရာများကိုကျွန်ုပ်သိမြင်နိုင်သည်။
ဤအတွေးကကျွန်ုပ်ကိုကောရိန္သုအသင်းသားများထံပေးပို့သောစာ၌တွေ့ရသည် -“ ဒါပေမယ့်လူတွေရဲ့အတွေးတွေဟာမှေးမှိန်လာပြီ၊ ဒီနေ့အထိသူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်ကိုဖုံးအုပ်ထားတယ်။ ပcovenantိညာဉ်တရားဟောင်းကိုဖတ်တဲ့အခါသူတို့ကအမှန်တရားကိုမသိကြဘူး။ ဒီကုလားကာကသာ ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် aufgehoben werden» (2. ကောရိန္သု 3,14 NLB).
ဤကုလားကာသည်မိုးတိမ်ဖုံးအုပ်ထားခြင်းဖြင့်သင့်အားယေရှုကိုရှာရန်မတားဆီးနိုင်ပါ။ သူသည်ဤလောက၏အလင်းဖြစ်သောကြောင့်သူတစ် ဦး တည်းကိုသာဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။ မည်သည့်ပညတ်ဥပဒေနှင့်မျှလိုက်နာခြင်းမရှိပါကချစ်လှစွာသောစာဖတ်သူကိုသင်သာယေရှုကိုထင်ရှားစေသည်။ သူ့မေတ္တာကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံချင်ပါသလား ၎င်းသည်သင့်အားအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှထာဝရကာလနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းသောအမြင်ကိုပေးသည်ကိုယုံကြည်ပါ။
Wenn Sie Jesus als Ihren persönlichen Herrn und Meister annehmen, hat dies Folgen für Ihr Leben und das Ihrer Nächsten. «Ihr seid das Licht der Welt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen» (aus Matthäus 5,14 နှင့် ၁၄)။
အကယ်၍ သင်သည်သခင်ယေရှုနှင့်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်လျှင်သင်၏အလင်းသည်သင့်အားလင်းလိမ့်မည်။ ကုလားကာဖယ်ရှားပစ်သည် သင်၏လုပ်ဆောင်မှုအားဖြင့်သင်သည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏အရေးအကြီးဆုံးကြွေးကြော်ခြင်းကိုပါ ၀ င်သည်။
ဘုရားသခင့်သားတော်မှတစ်ဆင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏သက်ရောက်မှုသည်သင်၏ဘ ၀ အပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်၊ ဘုရားသခင်ကိုမွေ့လျော်ပြီးဘုရားသခင်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသင်တွေ့ကြုံခံစားရန်သင့်တွင်အသင့်ရှိနေသည်။